1. Ma bixisaa Noocyada Koontada Ganacsiga Badan iyo sharuudaha ganacsiga kala duwan?
Waxaan hadeer bixinaa kaliya hal nooc Koontada Ganacsiga ah. Wixii warbixin dheeraad ah booqo bogga Koontada Ganacsiga.
2. Ma bixisaa farqiyada u dhaxeeyo dalabka go'an ama isbadelayo?
Waxaan bixinnaa farqiyada u dhaxeeyo dalabka isbadelayo, oo micnaheeda yahay inay sare u kacaan iyo hoos u dhacaan, caadi ahaan gudaha heerka ku xiran xaaaldaha suuqa. Si kastaba ha ahaatee ha ahaatee, inta lagu jiro suuqyada aan la qiyaasi karin, siideynada aqbaaraha danaha dhaqaalaha iyo meelaha banaan ee dhammaadka isbuuca, farqiyada u dhaxeeyo dalabka waxay balaaran karaan wax ka badan caadiga taas oo keliya ku xiran bixiyayaasha qiimaha ugu dambeeyo. gt.io kuma lahan wax awood ah midaan. Si aad u aragtid farqiyada u dhaxeeyo dalabka (isku celceliskeena) caadiga ah, fadlan riix badhanka 'Ganacsiga' ee dalabka bogeena oo xullo heerka hanti walba.
3. Qalabyadee qanacsiga ayaad bixisaan?
Waxaan bixinaa Hanti 6 Qaybood ah (Sarrif Qalaad, Kiribto, Biraha Qaaliga ah iyo Tamaraha, Tusmada Badeecada, Kaydadka) iyo wax ka badan 140+ qalabyo, ay geli karaan dhammaan macaamiisha. Wixii sharaxaado dheeraad ah, fadlan riix badhanka 'Trading' ee dalabka bogga websaydkeena si aad u aragtid dhammaan lamaanayaasha ganacsiga.
4. Miyaad ku dalacdaan qidmado koontooyinka ganacsiga?
Kuma dalacno qidmado koontooyinka ganacsiga.
5. Miyay jiraan Lacag dhigasho/kala bixitaanka ugu yar oo lagu bilaabo ganacsiga?
Ma jiraan wax xadeyno ah oo saaran safar ganacsi bilaabista.
6. Ma suurtogal baa in la qasaaro lacag ka badan inta aan ku soo shubay?
Maya. Waxaan bixinaa illaalada haraaga wanaagsan, oo micnaheeda yahay waxaad kaliya oo aad qasaareysaa cadadka aad ku soo shubtay. Haddii koontadaada ganacsiga leedahay haraa eber ka hooseeya sabab la xiriirto deynta/gunada, si toos ah ayay dib ugu celineysaa 0 markii aadan haysan boosas furan.
7. Haddii aan helo gunno miyaan u isticmaali karaa sida deynta shirkada dullaalka? Miyaan qasaari karaa iyada?
Dalacsiinteena waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaashid gunnooyinka, sida ay uga qeyb yihiin Sinnaantaada oo loo isticmaali karo ganacsi. Sidaas darteed waa suurtogal in la qasaaro gunadaada, oo lagaagama baahno inaad dib u celisid.
8. Miyaan badeli karaa lacagta asaaska ah ee koontadeyda?
Maya, suurtogal ma ahan badelka lacagta asaaska ah ee koontadaada ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, waad furi kartaa koonta ganacsi dheeraad ah oo dhinaca aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha) oo dooro beeska lacagta oo doorbiditaankaaga ah.
9. Sidee ayaan u badeli karaa baaswuudhka koontada ganacsigeyga MT5?
Si sahlan ayaad uga badeli kartaa baaswuudhka koontadaada ganacsi oo gudaha aaga illaalsan (Bogga Macaamiisha) adiga oo riixayo badhanka dalabka 'Trading Accounts'. Tani waxay aad ku taageeraysaa haddii aad ilowday baaswoodhkaagii, ama aad rabtid inaad beddeshaba. Fadlan raac tallaabooyinka hoose:
1. Booqo Koontada Ganacsiga aad jeclaan laheyd inaad ka badeshid baaswuudhka.
2. Liiska hoos ee Actions, ka dooro Beddel Baaswoodhka.
3. Geli baaswoodhkaaga cusub oo gudbi.
4. Markii aad dhameystirtid dhibicda 3, waxaad heleysaa i-meel kaa codsanayo inaad xaqiijisid codsiga. Riix badhanka xaqiijinta baswuudhkaaguna wuu badelmayaa.
Taas badelkeeda, si toos ah ayaad uga badeli kartaa baaswuudhkaaga bogga MT5. Si kastaba ha ahaatee, xaaladahaan, waa inaad xasuusataa baaswuudhkaaga hadeer sida aysan kugu suurtogaleyn inaad isticmaashid badhanka 'Copy Password' ee ku yaalo aagaaga Xubinta, sida midkaas uusan shaqeyneyn.
Waad badeli kartaa baaswuudhkaaga adiga oo raacayo tallaabooyinkaan: Aad Tools --> Options --> Click on change password -->Tick Change master password --> Enter Current password, New password, Confirm new password --> Click OK.
10. Waa maxay wareejinada maalinta xigta/qiimooyinka dulsaarku?
Markii aad ka furatid boos barta suuqa, waxay u baahantahay gaarsiinta jir ahaanta taas oo caadsi ahaan qaadato 2 maalmood gudahood kadib taariiqda wareejinta. Ganacsiga deynta shirkada dullaalka, Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan gaarsiin muuqato, sidaas darteeda, waxaad balaarin kartaa xogta booskaas adiga oo ugu wareejinayo si toos ah maalinta xigto.
Waa dulsaar laga baxsho ama lagu dallaco akoonkaaga ganacsi dhammaadka maalin ganacsiyeed kasta, taaso ku xidhan farqiga u dhexeeya heerka dulsaar labada lacagood ee lagu ganacsanayo.
11. Miyaad lacagta kiribtaha u adeegsataan dulsaarka/ ama qidmadda aan wareegin?
Ma isticmaalno caadi ahaan wareejinada maalinta xigta/qiimooyinka danaha ee joogaga Hantida dhijitaalka laakin waxaan isticmaalnaa maalgelinta (hantida koreyso) oo isticmaalka raasumaalka amaahda. Adiga oo isticmaalayo raasumaalka amaahda, waxaad si muhiim ah u amaahsaneysaa inta ka hartay raasumaalka si aad ugaga iibsatid maalgashiga gt.io, oo badelkeeda ah, gt.io wuxuu amaahsadaa in raasumaalka goobta halka dalabkaaga lagu fullinayo. Qidmooyinka dhaqaalaha waxaa la dallacaa 4 saacadoodba mar.
12. Haddii aan xirto booskeyga ka hor waqtiga la jadwaleeyay ee wareejinada maalinta xigta ama maalgelinta, booskeyga ma qidmadbaa ku dhacaysa?
Maya. Haddii aad xirtid booskaaga ka hor waqtiga la jadwaleeyay, booskaaga kuma dhacayso wax qidmad habeen dhax ah ama qidmad maaliyadeed ah.
13. Waqtigee ayaad qaaddaan habeen-dhaxyada/dulsaarka iyo maaligelinada?
Wixii Sarifka, Biraha, Enarjiyada, Tusmada Badeecada iyo Badeecooyinka, kuwaan waxaa laga qaadaa maalin walba saacada 00:00 Waqtiga Kumbuyuutarka, marka laga reebo Sabtida iyo Axada.
Wixii Hantida dhijitaalka joogaga, waxaa laga qaadaa 4 bilood ee walba, 6 jeer, ee 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00 iyo 23:00, 7 maalmood isbuucii.
Waqtiga Kumbuyuutarka waa GMT+3.
14. Maxay habeen-dhaxyada/dulsaarka lamaanaha Forex iyo Biruhu u saddex laabmaan Arbacooyinka kuwa Istooga iyo Idheysiskuna Jimcayaasha?
Qiimaha taariikheysan ee lamaanayaasha Forex 2 beri ayay horeeyaan. Sidaas darteed, boos furitaan lagu qabtay Arbacada wuxuu leeyahay taariiqda qiyamka oo Sabtida. Sida ganacsiga uu xiranyahay Sabtiyada iyo Axadaha qidmooyinka sadex jibaarka ah ee wareejinada maalinta xigta/qiimooyinka danaha waa inay quseysaa magdhowga dhammaadka isbuuca. Tani waxay quseysaa Lamaanayaasha Biraha iyo Enarjiyada sidoo kale. Isla sidaas ayay u quseysaa joogaga Badeecooyinka iyo Tusmooyinka laakin kuwaan waxaa lagu dalacaa Jimcooyinka.
15. Sidee ayaan u xisaabiyaa qiimooyinka danaha iyo qidmooyinka maalgelinta?
Wixii Sarif, Biro iyo Enarjiyada ah:
[Tirada Saamiyada xCabbirka Qandaraaska la gaarsin karo x Cabirka Ugu yar x Qiimaha danaha Isbadelada x Beeska Lacagta/Qiimaha Isdhaafsiga lacagta Koontada]
Tusmada Baceedada iyo Badeecooyinka:
[Tirada Saamiyada x Qiimaha danaha Isbadelada x Qiimaha Go'an ee Isdhaafsiga x Qiimaha Sarifka Lacagta Beeska ee Lacagta Koontada] / 360
Tirada Saamiyada = Tirada Saamiyada ee aad ku haysatid joog ahaan
Cabbirka qandaraaska = Tirada qandaraayada ku jiro 1 Qeyb (tusaale USOil waa 100)
Cabirka Ugu yar = Tirada godadka lamaanuhu leeyahay, lagu muujiyay tilmaamaha dhibcaha jajabka (tusaale USOil waa 0.01)
Dhibcaha Dulsaarka= Qiimaha isdhaafsiga ee dhibcaha
Beeska Lacagta = Aastaanta lacagta (tusaale USOil waa USD)
Lacagta Koontada = Lacagta koontadaada
Si aad u fiirisid tusaalayaal, fadlan riix badhanka 'Trading' ee dalabka websaydkeena, oo dooro heerka hantida.
16. Halkee ayaan hore uga arki karaa qidmaha dulsaarka iyo maalgeshiga?
Waxaad ka fiirin kartaa qiimooyinka is dhaafsiga ee gudaha boggaada ganacsiga adiga oo midigta riixayo oo jooga ganacsiga ee bogga Market Watch oo dooranayo faahfaahinta. Bog cusub ayaa la furmaya kaaso wata dhammaan faahfaahinada qalabka, oo ay ku jiraan isdhaafsiga dheer ama isdhaafsiga gaaban.
Laamanyaasha lacagta hantida dhijitaalka, qidmooyinka maalgelinta waxaa lagu daabacaa markaas oo qidmooyinka quseynayaan, sidaas darteed, waxaan daabacnaa maalin walba qidmooyinka taariiqiga ah oo isbuucle ku saleysan. Waxaad ku fiirin kartaa kuwaan adiga oo booqanayo bogga Hantida dhijitaalka.
17. Ma bixisaa Koontooyinka Netting ama Hedging-ka?
Waxaan bixinaa koontooyinka Hedging-ka.
18. Waa maxay saacadahaaga ganacsiga?
Lacagaha hantida dhijitaalka waxa laga ganacsan karaa 24/7. Sarifka, Tusmooyinka iyo Badeecooyinka, Biraha iyo Enarjiyada iyo Saamiyada waxaa la helaa 24/5. Fadlan booqo gt.io oo riix badhanka dalabka 'Ganacsiga' si aad u hesho macluumaadka saacadaha ganacsiga ee la xiriiro hantiyaha gaarka ah.
19. Aag waqtiyeedkee ayuu seerfarkaaga MT5 ku jiraa?
Aaga waqtigeena kumbuyuutarka waa GMT+3.
20. Halkee ayuu yaal seerfarkaaga MT5 yaalaa?
Kumbuyuutarkeena ganacsiga wuxuu ku yaalaa London (UK).
21. Ma bixisaan MT4?
Ma bixino MT4.
22. Waa maxay nooca fullintaada?
Waxaan siinaa Dalab Qiimo ogolaansho oo dhammaan lamaane ganacsiyeedka ah, oo micnaheeda ah in dalabyada ay ku jaheysnaaneyso goobaheena fullinta (bixiyayaasha qiimaha ugu dambeeyo) oo xaqiijinta qiimaha oo dib loogu soo celiyo qiimaha suuqa la heli karo ee ugu wanaagsan.
23. Waa maxay celiceliska xawaare ee fulintaadu?
Xawaaraheena isku celcelsi ee fullinta waa 120 millisekon oo ka bilaabaneyso waqtiga dalabkaaga soo gaaro kumbuyuutarkeena ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la kulmi kartaa daahitaano dheeraad ah oo aanan inaga xukumin, sabab la xiriirto xaqiiqda in boggaaga/barnaamijkaaga ganacsiga ka fulliyo dalabyada meel ka fog kumbuyuutarkeena ganacsiga. Haddii xawaaraha fullinta aad muhiim ugu yahay xeelada ganacsigaaga, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaashid VPS (kumbuyuutarka gaarka ah ee fogaanta) ee ku yaalo London (UK).
24. Ma bixisaan ganacsiga API?
Ma bixino ganacsiga API.
25. Markaan soo gudbisado dalab kasta, ma ii damaanad qaadi kartaa inaan helayo qiimaha aan codsaday?
Shirkaddu waxay teknoolijiyad heersare ah oo dalabka si degdeg ah u gudbisa si loogu fuliyo wax ka yar ilbiriqsi. Xaaladaha qaar waxaad heleysaa qiimaha la codsaday, Si kastaba ha ahaatee, inta lagu jiro xisaabinta tirikoobka iyo dhaqaaqyada suuqa degdega ah iyo siideynada aqbaaraha muhiimka ah, dalabyada waxaa lagu fullin karaa qiimo wanaagsan ama xun, ee loo yaqaan sida kala duwanaanshaha ganacsiga wanaagsan ama xun.
Waa in la ogaadaa in wixii Lacagaha hantida dhijitaalka ah, dhammaan dalabyada lagu fullinayo sida ku saleysan cabirka qiimela heli karo (badan) lagu bandhigay Depth of Market. Tani waxaa loola jeedaa in qiimahaad codsatay uu marwalba yahay Dusha Buugga (TOB)/Fadhiga 1 qiimaha, iyo dalabka waxaa lagu fullin karaa qiimo kala duwan, taas oo ah qiimaha isku celcelis ee la cabiray. Wixii sharaxaado dheeraad ah fadlan booqo Market Depth oo bogga Hantida dhijitaalka.
26. Waa maxay Qotada Suuqu?
gt.io waxay isticmaashaa xogta ku socoto halka qiimo si aad u baratid suuqa iyo xogta ganacsiga oo dhoor meelood oo fullin ah (bixiyayaasha qiimaha ugu dambeeyo ee rabaan inay ogolaadaan dalabyada cabirada kala duwan oo aan laheyn diidmooyinka) oo bixinayo qiimooyinka la fullin karo 100%. Markii isugeynta dhacdo, Qotada Suuqu wuxu muujinayaa dalabyada iyo weydiisaa heerarka qiimaha kala duwan oo loo heli karo fullinta la jirto cabirada qiimaha la qeexay (wax badan). Markii aad ku meeleysid dalab kale ee jooga Lacagta hantida dhijitaalka, waxay ku xirantahay qiyamka la codsaday, dalabkaaga waxaa lagu buuxinayaa qiimaha la heli karo oo heer walba (qiimaha isku celcelis la cabiray). Wixii sharaxaado dheeraad ah fadlan booqo Market Depth oo Hantida dhijitaalka si aad u aragtid tusaalooyin kala duwan.
27. Sidee ayaan u arki karaa Qotada Suuqa?
Aad Market Watch ee ku yaal gudaha boggaaga ganacsiga iyo midigta riix oo aastaanta oo aad jeclaan laheyd inaad aragtid warbixinta, oo dooro Depth of Market. Taas bedelkeeda, waxaad riixi kartaa midigta oo jadwalka oo dooro Depth of Market. Fadlan ogow in qiimooyinka kore ee ku casaanka la mariyay ay matalayaan weydiimaha iyo qiimooyinka hoose ee ku tilmaaman baluuga waxay matalayaan dalabyada.
28. Waa maxay lod? Waa intee lodku?
Lodku waxa uu taagan yahay xaddiga lacageed (ama cabbirka Qandaraas) ee aad Iibsan ama Gadi lahayd, lamaane ganacsiyeed kastana hore ayaa laga sii sheegay. Ee MT5, Xaddiga waxaa lagu cabiray Lots. Tusaalaha 1 Qeyb oo USDJPY wuxuu u dhigmaa 100,000 USD. 1 qeyb oo XAUUSD (Dahab) waa 100 Troy Waqiyadood ama 100 qandaraasyada. Wixii sharaxaado dheeraad ah oo ku saabsan waxa lodku u dhigmo, waxaad fiirin kartaa faahfaahinta ganacsigeena ee ka hooseyso badhanka 'Ganacsiga' ee dalabka guud ama adiga oo riixayo midigta oo qalab walba oo bogga Market Watch oo gudaha barnaamijka ganacsigaaga oo dooranayo faahfaahinta.
29. Ma ogolaataan wararka Ganacsi?
Haa, waan ogolaaneynaa Wararka Ganacsiga.
30. Ma ogolaataan iskaalbinka?
Haa, waan ogolaaneynaa iskaalbinka.
31. Ma ogolaataan hedjin?
Haa, waan ogolaaneynaa inaad xadeysid boosaskaada oo koontada isku ganacsiga ah adiga oo furayo booska Ibso iyo Ibi oo isla qalabka ah.
32. Waa maxay Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka (Raasumaalka amaahda)?
Waxaan bixinaa raasumaalka amaahda oo u dhaxeeyo 1:5 - 1:500 ama Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka oo 20% - 0.2%.
Fadlan ogow in raasumaalka amaahda ku kala duwanyahay noocyada amaaha, oo si muhiim ah ayaa loogu saxaa sida ku saleysan Qiyamka USD. Wixii warbixin dheeraad ah, fadlan booqo badhanka 'Ganacsiga' ee ka hooseeyo bogga guud oo xullo nooca hantida oo aad rabtid inaad hubisid Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka.
33. Maxay ku kala duwanyihiin ee u dhaxeeyo Deynta shirkada dullaalka iyo Raasumaalka amaahda?
Raasumaalka amaahda waa saamiga u dhaxeeyo cadadka lacagta ee aad dhabtii qabtid iyo cadadka lacagta aad ku ganacsan kartid, taas oo caadi ahaan loo muujiyo sida 1:X. waa badinta ee Hantidaada ee kuu ogolaanayo inaad furatid boosas ganacsi weyn.
Deynta shirkada dullaalka waa cadadka loo baahanyahay ee loogu tallogalay furitaanka ama joogteynta boosas, oo waxaa caadi ahaan lagu muujiyaa xeerarka boqolkiiba.
Tusaale ahaan, booska 0.01 Tirada ee XAUUSD oo 1700.00 waxay haysaa raasumaalka ugu badan ee 1:100, sidaas darteed deynta shirkada dullaalka loo baahanyahay waxay ahaaneysaa 17 USD ama 1% oo hal qandaraas ah XAUUSD.
34. Sidee ayaan u xisaabin karaa Deynta shirkada dullaalka Loo baahanyahay?
Lamaanayaasha Sarrifka, waxaa loo xisaabiyaa sida xigta:
Tirada Saamiyada * Tayada Badeecada la gaarsin karo / Raasumaalka amaahda ama * Deynta shirkada dullaalka %. Natiijada waxay marwalba ku jirtaa lacagta amaahda.
Wixii Biraha, Enarjiyada, Tusmada Badeecada iyo Badeecooyinka waxaa loo xisaabiyay sida soo socota:
Tirada Saamiyada * Tayada Badeecada la gaarsin karo * Qiimaha Furitaanka / Raasumaalka amaahda ama * Deynta shirkada dullaalka %. Natiijada waxay marwalba ku jirtaa lacagta amaahda.
Fadlan ogow raasumaalka amaahda muhiimka ah waxay quseysaa dhammaan amaahaha. Tani waxaa loola jeedaa waa inaad u xisaabisaa heer walba si gooni ah oo aad isku soo duubtid natiijooyinka. Dantaadad darteed, fadlan fiiri Xisaabiyaheena Deynta shirkada dullaalka Raasumaalka Amaahda Muhiimka ah.
35. Waa maxay Heerka Deynta shirkada dullaalka Firfircoon/Deynta shirkada dullaalka Bilaashka ah iyo sidee ayaan u xisaabiyaa?
Heerka Deynta shirkada dullaalka waa xaddiga boqolkiiba ee ku saleysan cadadka loo heli karo karo deynta shirkada dullaalka la isticmaali karo iyo deynta shirkada dullaalka la isticmaalay ama saamiga ee qiyamkaaga hadeer ee deynta shikrada dullaalka oo waxaa loo xisaabiyaa sida xigto:
Heerka Deynta shirkada dullaalka = (Raasamaalkaaga hadeer/Deynta shirkada dullaalka) * 100
Deynta shirkada dullaalka Bilaashka ah waa cadadka lacagta ee diyaarka kuu ah si aad ugu furatid boosas cusub oo waxaa loo xisaabiyaa sida xigta:
Deynta shirkada dullaalka Bilaashka ah = Qiyankaaga hadeer - Deynta shirkada dullaalka
36. Waa maxay raasumaalka amaahda is bedbedeshaa?
Raasumaalka amaahda is bedbedeshaa wuxuu noo ogolaanayaa inaan si muhiim ah u yareyno waqtiga dhabta ah cadadka Raasumaalka amaahda ee aad u yeelan kartid aaladiiba si markaas looga illaaliyo koontadaada raasumaalka amaahda xad dhaafka ah iyo qiyamyada weyn. Mar kast oo xaddigu kordho, waxa iyana kordhaya qatarta khasaaraha luminta qeyb weyn ama dhammaan lacagaha, sidaas darteed, raasumaalka amaahda ee la bixiyay hoos ayay u dhacaan sida waafaqsan. Fadlan aad badhanka 'Trading' ee ku hoos jira dalabka guud si u fiirisid sharuudaha deynta shirkada dullaalka oo heerka hanti walba ama qalabka ganacsiga.
37. Sidee ayaan u furi karaa boos cusub?
Midig riix oo qalab walba ee ku jiro bogga Market Watch oo dooro 'New Order' ee barnaamijkaaga gancsiga. Qaab kale waa inaad riixdo Bidixda/Labo jeer oo qalabka ah. Si degdeg loogu fuliyo, waxaad isticmaali kartaa 'ganacisga Hal Taabasho'.
Ku dhammaystir macluumaadka la sharxay daaqada cusub.
38. Sidee ayaan u xiri karaa boos?
Riix Midigta/Labo jeer ganacsiga aad rabtid inaad xirtid. Markii bogga dalabka furmo, riix ‘Close’ kadibna ‘OK’.
39. Muxuu ganacsigeyga marwalba ugu furmaa faa'iido eber ka hooseysa?
Tani waa sabab la xiriirto farqiyada u dhaxeeyo ee la isticmaalay. Haddii aad furtid booska iibsiga, kadib qiimaha xiritaanka waa dalabka (oo ka hooseeyo qiimahaaga furitaanka), iyo haddii aad furtid booska iibinta, qiimaha xiritaanka waa weydiinta (ka sareeyo qiimaheyga furitaanka).
40. Miyaan badeli karaa Raasumaalka amaahda ee koontadayda ganacsi? Haddii ay haa tahay, sidee?
Haa, waad badeli kartaa raasumaalka amaahda ee gudaha aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha). Sida waafaqsan badhanka dalabka 'Ganacsiga', xullo koontada ganacsiga, oo riix Tallaabada (...), xullo 'Codso Badelka Raasumaalka amaahda' oo raac tilmaamaha la tilmaamay.
Fadlan ogow in balaaba hadii aad codsato yaraynta raasumaalka amaahdaada, howlwadeenka wuxuu KALIYA ansixinayaa midaan haddii aadan laheyn boosas furan.
41. Waa maxay dhibici sideebaanan u xisaabin karaa qiimaha dhibic?
Dhibicdu waa qiimaha ugu yar sicir beddelan ama korodhka ugu yar ee qiimaha. Tusaale ahaan 1 qiimaha ugu yar ee EURUSD iyo 5 jajabka waa 0.00001.
Xisaabinta qiimaha ugu yar ee dhibicdu waa sidan soo socota:
Tusaalaha: 1 Qeyb oo EURUSD
0.00001 * 100,000 (Tayada Badeecada la gaarsin karo) = 1 USD
42. Ma jiraa qiime ugu yar markaan gudbiyo ganacsi?
Dhammaan noocyada amaahuhu waxay leeyihiin cabbir lodeed sida hoos ka muuqata:
Sarifka, Biraha, Enarjiyada iyo Tirada Saamiyada Ugu badan Badeecada: 0.01 Qeybta
Tirada Saamiyada Ugu badan Tusmada badeecada: 1 Qeybta
43. Maxaa badhinada Iibi iyo Iibso aanad diyaar u ahayn (aan si fiican u muuuqan) markii aan isku dayo inaan geliyo dalab bogga dalabka?
Sababta suurtogalka ah waa inaad isku dayayso inaad ganacsi ku furato xaddi ka yar (lod) qiimaha ugu yar ee la ogol yahay. Si markaas loo hubiyo inaad galeysid cabirka qeybta oo u dhigma ama ka weyn tan ugu yar ee aad midigta riixi kartid oo aalada bogga Market Watch oo dooro faahfaahinta. Bogga cusub ayaa soo baxayo oo wato dhammaan faahfaahinada qalabyada halkaas oo aad ka heli kartid Qiyamka Ugu yar. Badelkeeda waxaad booqan kartaa badhanka dalabka "Ganacsiga" ee websaydkeena oo aad heshid qalabka cabirka qeybta ugu yar.
44. Miyaan isticmaali karaa La Taliye Khabiira (EA)? Sidee ayaan u sameeyaa?
Haa. Fadlan raac tallaabooyinka hoose:
1.Exper Advisor kaaga ku kaydi galka Experts ee ku jira MT5 ee kombuyuurtarkaaga. Tani waxaa caadi ahaan laga helaa hoosta C:\_Program Files\_MetaTrader5\_MQL5\_Experts\_Advisors
2. Dib u daar MT5
Faylka Exper Advisor waa inuu ka muuqdaa daaqadda hagista ee Meta Trader ka.
3. Riix iyada oo geli shaxda lacagta oo aad jeclaan laheyd in EA ku ganacsatid
4. Bogga 'Properties' ee soo baxaa, taabo 'Allow Auto trading'
Raadi badhanka 'Tools' -> 'Options' -> 'Expert Advisors'
Taabo 'Allow automated trading'
Hadeer waxaa kuu suurtogaleyso inaad aragtid aastaan wadata goobo cagaaran oo geska gacanta midigta kore ee shaxdaada si aad u aragtid inaad u furtay EA gaaga si sax ah.
45. Waa maxay Partial Close sidee baanse u isticmaali karaa?
Waxaad ka dooran kartaa booska qeyb ahaan xiran. Tani waxaa loola jeedaa in haddii aad furatid boos xaddigii yahay 10 USDJPY, waxaad dooran kartaa inaad xirtid qeyb xaddigaas ah. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa inaad xirtid 3 qeybood oo ka tagtid xaddi 7 qeybood ah oo furan.
Waxaad midaan ku sameyn kartaa adiga oo riixayo laba jeer booska furan, una ogolaanayo bogga dalabka inay furanto. Hoosta goobta 'Volume' waxaad ku dul qori kartaa midaas qiyamka aad rabtid inaad xirtid, oo riix badhanka Close ee ku tilmaaman jaalaha.
46. Shaqo u xirista ma la ogol yahay?
Close by Function lama ogola.
47. Shaqo u xirista badan ma la ogol yahay?
Xiritaanka Badan oo shaqada lama ogola
48. Waa maxay Stop Loss oo sidee ayaan u daaraa?
Stop Loss waa dalab xadidan oo aad gelin kartid haddii aad rabtid in booskaagii horay u furnaa si toos ah u xirmo markii qiimo la gaareeyay lagu gaaro qasaaraha. Jooji Qasaaraha waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo qasaarooyinka oo ka illaaliyo Haraagaaga dhaqaaqyo daran. Haddii booskaaga uu yahay IIBSO, kadib waa inaad ka dhigtaa Khasaare Joojinta dhiga qiime ka hooseeya ka wax lagu iibinayo hadda. Haddii booskaaga uu yahay IIBI, markaas waa inaad ka dhigtaa Stop Loss kaaga qiimaha weydiinta sareyso kadib qiimaha weydiinta hadeer.
Waxaad ka dhigi kartaa Stop Loss gudaha bogga dalabka ka hor inta aadan furin booska ama waxaad ku badeli kartaa booska jiray adiga oo riixayo miidgta ee dalabka oo dooranayo Modify ama Delete.
Fadlan ogow inay jiraan baaxada qiimaha ugu yar markii aad ka dhigeysid Stop Loss. Fadlan fiiri heerarkeena Xadeynta iyo Joojinta ee ku hoos jira badhanka dalabka 'Trading', ama hoosta bogga Market Watch - Faahfaahinta.
49. Waa maxay Take Profit iyo sideense ayaan u geliyaa?
Take Profit waa dalab xadidan oo aad geliso haddii aad rabtid in booskaagii horay u furnaa si toos ah u xirmo markii qiimo la gaareeyay lagu gaaro faa'idada. Haddii booskaaga uu yahay IIBSO, kadib waa inaad ka dhigtaa Take Profit qiimaha dalabka ugu sareeyo kadib qiimaha dalabka hadeer. Haddii booskaaga uu yahay IIBI, kadib waa inaad ka dhigtaa Take Profit kaaga qiimaha weydiinta ka hooseyso kadib qiimaha weydiinta hadeer.
Waxaad ka dhigi kartaa Take Profit gudaha bogga dalabka ka hor inta aadan furin booska ama waxaad ku badeli kartaa booska jiray adiga oo riixayo miidgta ee dalabka oo dooranayo Modify ama Delete.
Fadlan ogow inuu jiro masaafo dhibceed ugu yar markaad sameynayso Faa'iido Qaadasho. Fadlan fiiri heerarkeena Xadeynta iyo Joojinta ee ku hoos yaal badhanka dalabka 'Trading', ama hoosta bogga Market Watch - Faahfaahinta.
50. Waa maxay dalabyada la sugayo oo sidee ayaan ugeliyaa iyaga?
Dalabka la sugayo waa tilmaan aad gacan ahaan u gelisid ama dhinaca La taliyaha Taqasuska (EA) ee iibsiga ama iibinta qalab oo qiima horay loo qeexay. Markii qiimo la gaaro, dalabka si toos ah ayuu u kacayaa, isagoo ka furayo boos oo qiimaha suuqa.
Noocyada Dalabyada La sugayo:
- Xadka Gadashadu waa hab lagu furto boos iibsasho Qiimaha Waydiintaa ee mustaqbalka. Waa in lagu dajiyaa meel ka hooseyso qiimaha hadeer
- Buy Stop waa dalab ka furayo boos qiimaha Weydiinta mustaqbalka. Waa in lagu dajiyaa meel ka sareeyo qiimaha hadeer
- Sell Limit waa dalab ka furayo boos iibinta ee qiimaha Weydiinta mustaqbalka. Waa in lagu dajiyaa meel ka sareeyo qiimaha hadeer
- Joojinta Iibintu waa hab lagu furto boos iibsasho Qiimaha Waydiintaa ee mustaqbalka. Waa in lagu dajiyaa meel ka hooseyso qiimaha hadeer.
- Buy stop limit: noocaan wuxuu usu geeyaa labada nooc ee ugu horeyso ee ahaanshaha dalabka joojinta ee loogu tallogalay Buy Limit. Sida ugu dhaqsiha badan ee qiimaha Weydiinta mustaqbalka ku gaaro heerka joogsiga ee lagu tilmaamay dalabka (goobta Qiimaha), dalabka Buy Limit ayaa lagu meeleynayaa heerka, lagu qeexay goobta qiimaha Stop Limit. Heerka joogsiga ayaa laga dhigaa mid ka koreeya qiimaha Weydiinta hadeer, iyada oo qiimaha Stop Limit la geliyo hoosta heerka joogsiga.
- Xadka Joojinta Iibka: kan waa nooc dalab joojineed loo sameeyo Xadka Iibinta. Sida ugu dhaqsiha badan ee qiimaha Dalabka mustaqbalka gaaro heerka joogsiga ee lagu tilmaamay dalabka (goobta Qiimaha), dalabka Sell Limit ayaa lagu meeleynayaa heerka, lagu qeexay goobta qiimaha Stop Limit. Heerka joogsiga ayaa la geliyaa hoos qiimaha Dalabka hadeer, iyada oo qiimaha Stop Limit la gelinayo dusha heerka joogsiga.
Waad gelin kartaa dalabka la sugayo adiga oo furayo bog dalab cusub oo dooranayo Nooca: Pending Order ee hoosta Aastaanta, oo kadib dooranayo nooca dalabka la sugayo ee aad rabtid inaad gelisid.
Fadlan ogow inay jiraan baaxada qiimaha ugu yar markii aad ka dhigeysid dalabyada la sugayo. Fadlan fiiri heerarkeena Xadeynta iyo Joojinta ee hoosta badhanka dalabka 'Trading', ama hoosta bogga Market Watch - Faahfaahinta.
51. Maxaysan faa'iido qaadashayda, khasaare joojintayda ama dalabkayga la sugayo u shaqayn la' yahay? Shaxda waxay muujineysaa in ay gaartay qiimaha la qeexay.
Qiimaha lagu muujiyay shaxda waa dalabka, sidaas darteed, waxaad u baahantahay inaad hubisid in qiimaha kacay uu ahaa dalab.
Boosaska iibsiga, dalabyadaada Joojinta Qasaaraha, Faa'ido Qaadashada, xadeynta Ibsiga iyo Joojinta Ibsiga waxay ku dhaqaaqdaa qiimaha dalabka.
Boosaska iibsiga Joojinta Qasaarahaaga, Faa'ido Qaadashada, Xadeynta ibinta iyo Joojinta Ibinta waxay ku kaxeysaa qiimaha weydiinta.
52. Waa maxay Trailing Stop oo sidee ayaan u geliyaa?
A Trailing Stop waxay badeshaa nidaamka badelida heerkaaga Joojinta Qasaaraha. Waxay kuu ogolaataa inaad qeexdid Heerka Trailing Stop ee dhibcaha, iyo sida ugu dhaqsiha badan ee faa'idada oo dhibcaha la mid noqdaan ama ka badanyihiin qiyamka la qeexay, dalabka tooska ah waxaa loo saasaaray inay ku meeeysp Joojinta Qasaaraha baaxada la qeexay ee qiimaha suuqa hadeer. Haddii qiimuhu dhaqaaqo oo sii kordhinayo faa'idada booska, Stop Loss ayaa si toos ah u wada dhaqaajiso qiimaha.
Waxaad ku gelin kartaa Trailing Stop adiga oo riixayo midigta booska furan oo dooranayo Trailing Stop iyo Custom. Bog cusub ayaa soo baxayo, oo kaa codsanayo inaad qeexdid Heerka Trailing Stop ee dhibcaha. kadib riix OK.
Fadlan ogow inay jiraan masaafo dhibceed ugu yar markaad samaynayso Trailing Stop. Fadlan fiiri heerarkeena Xadeynta iyo Joojinta ee ku hoos jira badhanka dalabka 'Trading', ama hoosta bogga Market Watch - Faahfaahinta.
53. Waa maxay Hoos u dhaca Sharuuda deynta shirkada oo heerkee ayay ku kacdaa?
Hoos u dhaca Sharuuda deynta shirkada waa digniin/ogeysiin dhacdo markii Heerka Deynta shirkada dullaalku % gaarto meesha qaarkood. Taasi waxay la micna tahay in boosaskaaga ay halis ugu jiraan inay jarjar noqdaa oo ku dhowdahay heerka joojinta ka bixitaanka. Heerkaan waa inaad midkood maalgelisaa koontadaada ganacsiga ama xirtaa boosaska furan si markaas aad u yareysid deyntaada shirkada dullaalka.
Heerka Hoos u dhaca Sharuuda deynta shirkada waxaa laga dhigaa 80%.
54. Waa maxay Stop Out iyo heerkee ayuu ku kacaa?
Stop Out wuxuu dhacaa markii Heerka Deynta shirkada dullaalka % gaaro meesha qaar. Taasi waxaa loola jeedaa waxaad haysataa lacag aan kugu filneyn oo aad ku taageertid boosaskaaga furan iyo kala diritaanka (xiritaanka boosaska) way bilaabaneysaa. Nidaamka wuxuu xiraa boosaska oo ka bilaabayo kuwa lahaa qasaaraha ugu sareyay illaa Qiyamkaaga hadeer (ama Heerka Deynta shirkada dullaalka %) ka sareeyo heerka Joogsiga ka bixitaanka %.
Heerka Stop Out waxaa laga dhigaa 50%.
55. Waa maxay Heerarka Xadeynta iyo Joojintu?
Heerarka Xadeynta iyo Joojinta waa baaxada dhibcaha ee qiimaha suuqa hadeer, oo gudaha oo ka mamnuucan gelinta Stop Loss, Take Profit iyo Pending Orders. Markii aad isku daydid inaad gudbisatid dalab gudaha xadeynada, waxaad heleysaa fariin kuu sheegeyso 'Invalid Stops'.
56. Maxay la micna tahay fariinta 'Trade Context Busy'?
Xaaladaha qaar laga yaabo inaad siisay barnaamijka tilmaan dheeraad ah ka hor inta midkii hore aan dhameystirmin. Tani waxay dhici kartaa markii aad taabatid isla tilmaan dhowr jeer, ama markii aad isticmaashid EA oo sareeyo. Xaaladahaan oo kale, waxaad heleysaa fariin kore oo ku ogeysiineyso inaad sugtid illaa tallaabadaada hore la dhameystiro.
57. Maxaan mararka qaar u helaa fariinta qaladka oo dhaheyso 'Invalid S/L ama T/P markii aan isku dayo inaan geliyo dalab?
Sababaha suurtogalka ah ee fariin qaladeedkaan waxaa ka mida:
1. Joojinta Qasaaraha la gaareeyay ama qiimaha faa'ido Qaadashada waa qalad. Fadlan hubi in markii aad gashid booska Iibsiga, qiimaha Joojinta Qasaaraha ayaa la geliyaa hoose iyo qiimaha faa'ido Qaadashada waxaa la geliyaa si ka sareyso qiimaha suuqa hadeer. Markii aad gashid booska Iibinta, qiimaha Joojinta Qasaaraha ayaa laga dhigaa sare iyo Faa'ido Qaadashada waxaa la geliyaa si ka hooseyso qiimaha suuqa hadeer.
2. Haddii tilmaanta 1 ay qalad tahay, fadlan hubi in masaafada qiimaha suuqa hadeer aysan ku jirin gudaha Heerarka xadeynta iyo Joojinta.
58. Maxaan u helaa fariinta qaladka oo dhaheyso 'ma lahan lacag kugu fillan'?
Sababtoo ah ma haysatid Deynta shirkada dullaalka Bilaash oo kugu fillan ama Heerkaaga Deynta shirkada dullaalka ayaa ka hooseeyo 100%. Fadlan hubi hadeer si aad u xisaabisid sharuudaha deynta shirkada dullaalka adiga oo booqanayo badhanka dalabka 'Ganacsiga' ee nooca hanti walba.
59. Maxaan sameeyaa haddii ay jiraan dhibaato ganacsiga gaarka ah?
Waxaad marwalba hubin kartaa qeybta FAQ oo ka eegi kartaa jawaabta suurtogalka ah ee weydiintaada. Haddii lacala aadan helin jawaabta, waxaad ka furan kartaa tikidka dhinaca aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha) ama noogu soo dir i-meel support@gt.io iyo kooxdeena baaritaankeenka ayaa kugu soo laabanayo sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah.
60. Miyay koontooyinka Ganacsiga si toos ah loogu keydiyay marna?
Haa, koontooyinka ganacsiga MT5 si toos ah ayaa loo keydiyaa 30 maalmood kadib oo howl la'aan iyo marka haraagu ebar noqdo. Waxaa lagu siinayaa iqtiyaarka lagu abuurayo koonto cusub oo MT5 markii aad ku shubatid lacagaha oo lacagtaada aad doorbiday.